Ihe niile banyere ihe ọhụrụ Oneplus 5: teknụzụ nkọwa na ọnụahịa | Gam akporosis
Smartphone onye OnePlus emesia kpughere flagship ọhụrụ ya n'izu a, OnePlus 5, a pụrụ iche na ngwaọrụ na a 5.5-anụ ọhịa ihuenyo na gam akporo 7.1.1 Nougat mobile sistemụ.
E gosipụtara OnePlus 5 dị ka akụkụ nke ihe omume mgbasa ozi dị ndụ ma ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ kọwara ya dịka obere mkpanaka nke ha mere. Ngwaọrụ na-enye a igwefoto abuo maka ịse foto dị nkọ na mmetụta HDR ka mma, yana sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ Android Nougat (na nhazi akwa OxygenOS), na ụfọdụ nkọwa nkọwa dị egwu anyị na-ekpughe n'okpuru.
Teknụzụ Dash Charge bụ akụkụ ọzọ dị ike nke OnePlus 5, teknụzụ na-akwụ ụgwọ nwere ike ịnye gị ụbọchị nke nnwere onwe mgbe naanị nkeji iri atọ na-akwụ ụgwọ.
1 OnePlus 5 nkọwapụta nkọwapụta
2 Ahịa na nnweta nke OnePlus 5
OnePlus 5 nkọwapụta nkọwapụta
OnePlus 5 ngwanrọ
The OnePlus 5 na-etu ọnụ mmetụ capacitive 5.5-inch Optic AMOLED nwere mkpebi Full HD 1080p (1920 x 1080 pikselụ), agba 16 nde na Corning ozodimgba iko 5. Nakwa, ọhụụ ọhụrụ ahụ na-eme Qualcomm MSM8998 processor n'ime. Snapdragon 835 nke esonyere ya 2.45 GHz Kryo octa-core CPU na a Adreno 540 GPU GPU. Na mgbakwunye, mkpanaka ahụ na - etinye RAM LPDDR4X nke 8GB na Midnight Black version ya na 6GB RAM na ụdị Slate Gray ya.
Naanị naanị 7.25mm ka ọkpụrụkpụ, OnePlus 5 na-eweta a Igwefoto abụọ dị n'azụ (16 MPx f / 1.7 + 20 MPx f / 2.6) site na nchọpụta autofocus na ikanam flash, ihe ndekọ vidiyo na 2160p mma na okpokoro 30 kwa nkeji, yana 16 megapixel n'ihu igwefoto na 1080p na-edekọ.
Banyere njikọta, Onye OnePlus 5 na-eweta Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot nkwado, Bluetooth 5.0 A2DP LE, GPS wuru na A-GPS, GLONASS na BDS na njikọ USB Type-C 2.0.
Dash n'Aka na OnePlus 5
Na OnePlus 5 anyị na-ahụkwa a akara mkpisiaka n'ihu, yana ihe mmetụta dị nso, gyroscope, accelerometer, compass dijitalụ na batrị na-enweghị ewepu 3300mAh na teknụzụ Dash Charge.
Ikekwe otu nnukwu ọghọm nke OnePlus 5 bụ enweghị oghere maka mgbasawanye ebe nchekwa, ọ bụ ezie na na Midnight Black mbipute ya na 8GB nke RAM na-eweta ọnụ 128GB nke nchekwa dị n'ime, ebe ụdị Slate Gray na 6GB RAM na-eweta 64GB nke ohere maka nchekwa data. N'okpuru ebe a ịchọta tebụl zuru ezu na atụmatụ niile nke OnePlus 5:
Ihuenyo 5.5-anụ ọhịa Optic AMOLED
Mkpebi 1080P Full HD (1920 x 1080 pikselụ) 401ppi
Kpuchie iko 2.5D Corning ozodimgba iko 5
CPU Qualcomm Snapdragon 835 (isi asatọ / 10 nm / ruo 2.45 GHz)
Nchekwa 64 / 128GB
Rear igwefoto 16MP Wide Angle (f / 1.7 + Autofocus) + 20MP Telephoto (F / 2.6 + Autofocus) + Dual LED Flash
Igwefoto n'ihu 16 megapixels (f / 2.0)
Ndekọ vidiyo 4K na 30fps / 1080p na 60fps / nwayọ ngwanrọ (720p na 120fps)
Sensọ Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka + Ihe mmetụta sensorlọ Nzukọ + accelerometer + gyroscope + ihe mmetụta sensọ
Njikọ Bluetooth 5.0 + NFC + Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac Dual Band
Ọdụ ụgbọ mmiri USB-C + 3.5mm nkesa ọdịyo + Oghere nano-SIM abụọ
Batrị 3300mAh nwere ikikere Dash
Akụkụ X x 152.7 74.7 7.25 mm
Ibu ibu 153g
Usoro njikwa Android 7.1.1 Nougat na interface OxygenOS
ahịa 559 euro maka Midnight Black (8GB Ram + 128GB) / 499 euro maka Slate Gray (6GB Ram + 64GB)
Ahịa na nnweta nke OnePlus 5
A ga-ere OnePlus 5 site na weebụsaịtị wepụtara site na June 27, ọ bụ ezie na ugbu a enwere ike zụta ya ozugbo na ụlọ ahịa na New York, London, Berlin, Paris, Amsterdam, Helsinki na Copenhagen.
Versiondị ahụ OnePlus 5 Midnight Black (ya na 8GB Ram na 128GB nchekwa) ga-ere maka 559 euro, mgbe mbipute Selie Grey (ya na 6GB Ram na 64GB nke nchekwa) ga-eri 499 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Ihe niile banyere ihe ọhụrụ Oneplus 5: nkọwapụta nkọwa na ọnụahịa
Ọhụrụ Pokemon GO melite dị nso karịa mgbe ọ bụla!